दुर्घटनामा मृत्यु भएकी भनिएकी सपना यस्तो अवस्थामा फेला परिन, परिवारमा पनि चकित » बुद्ध भूमि नेपाल
भोलि कार्तिक ७ गते आइतबार, यस्तो छ तपाइको राशिफल
टिभीमा लाइभ समाचार पढिरहेका बेला अचानक यस्तो भएपछी जे भयो त्यो देखेर सबै हैरान !
समीक्षाले फोटो, भिडियो सार्वजनिक गरिदिने भएपछि हच्चिए पल, विवाहको लिखित सहमति भएको खुलासा
सुर्खेतमा ब’म वि’स्फोट, दिदीभाइ घाइते, कस्तो छ अहिले त्यहाँ को अवस्था ?
केही दिनदेखि बिगबोस फेम तथा हरियाणवीको नृत्यगंना सपना चौधरीको निधनको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । उनको हरियाणाको सिरसामा सडक दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको दाबी गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उनको मृत्युमा श्रदान्जली दिनेहरु पनि धेरै थिए ।
उनको मृत्युको खबरले परिवार तथा आफन्त स्त’ब्ध भए । तर उनको यो मृत्यु साचो नभएर अ’फवा’ह मात्र थियो । उनी हालसम्म जि’उदै छिन् । पछिल्लो समय एक अन्तर्वाताको क्रममा सपना चौधरीले निधनको अ’फवा’हले आफ्नो परिवारलाई धेरै चो’ट पुगेको बताएकी छिन् ।
उनले आफैले परिवारलाई आफु जि’उदै भएको बताउदै सम्झाउन नै गाह्रो परेको बताइन् । उनले आफ्नो पेशामा अनेक तरहका अ’फबा’हसँग जु’ध्न पर्ने उनको भनाई थियो । आफ्नो कारणले गर्दा परिवारमा पनि धेरै गा’ह्रो हुने उनले तर्क गरिन् । सपना हरियाणवी नृत्य र स्टेज शो को कारण चर्चित छिन् । उनले २०२० मा विवाह गरेकी हुन्, उनको एक छोरा पनि छ ।
इन्डियन आइडल विजेतालाई हृतिक रोशनकी आमाले दिइन् सुनको सिक्री र नगद
यस पटक ‘इन्डियन आइडल–१२’ का विजेता पवनदीप राजन भए। गायिका अरुणिता कान्जीलाल पहिलो रनर–अप भइन्। इन्डियन आइडलको विजेता भएपछि यी दुई गायकका लागि अवसरका ढोकाहरु खुलेका छन्। उनीहरु थुप्रै सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन्।
यही क्रममा हालै पवनदीप र अरुणिताले बलिउड अभिनेता हृतिक रोशनका बुबा राकेश रोशन र आमा पिंकी रोशनलाई पनि भेट्ने मौका पाएका छन्। ‘राकेश र पिंकी रोशन हामीलाई देखेर भावुक हुनु भयो र हामी दुबैलाई अँगालो हाल्नु भयो,’ राकेश र पिंकीसँगको भेटबारे कुरागर्दै पवनदीप राजनले भने, ‘हामीले केही गीत पनि गायौं र उहाँहरुले हाम्रो उपस्थिति मन पराउनु भयो।’
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार सो भेटमा हृतिककी आमा पिंकीले पवनदीपलाई सुनको रुद्राक्ष सिक्री र भगवान लक्ष्मीको चित्र भएको सुनको पैसा उपहार दिएकी थिइन्। ‘पिंकीजीलाई त्यो सुनको रुद्राक्ष सिक्री उहाँको बुबाले दिनुभएको रहेछ,’ पवनदीपले भने, ‘म आफैं एउटा रुद्राक्ष माला किन्न खोजिरहेको थिएँ र पिंकी जीले मलाई त्यही उपहार दिनु भयो।’
राकेश र पिंकी रोशन इन्डियन आइडलका विजेता पवनदीप र अरुनिताको ठूलो प्रशंसक थिए र उनीहरुलाई भेट्न चाहिरहेका थिए। भेटमा पवनदीप र अरुणिताले रोशन दम्पतिसँग तीन घण्टा बिताए। सो भेटमा पवनदीप र अरुणिताले हृतिक रोशनसँग भने लामो समय भेट्न पाएनन्।
‘हृतिकसँग हामीले एकैछिन मात्र भेट्न पायौं,’ पवनदीप भन्छन्, ‘उनले अरुणिता र मलाई शुभकामना दिए र जीवनमा मेहनत गरेर अझै अगाडि बढ्न सुझाव दिए।’
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अहिले पवनदिप र अरुणिता राज सुरानीको निर्देशनमा नयाँ गायन सिरिजको तयारी गर्दै छन्। उनीहरु विभिन्न समारोहमा सहभागी भई भिडियोमा पनि देखिने भएकोले गायनसँगै नृत्य गर्न सिकिरहेका छन्।
६ कार्तिक २०७८, शनिबार २२:३४
६ कार्तिक २०७८, शनिबार २०:३४
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १९:४७
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १९:०१
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १७:४०
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १६:५५